Nhau - Iko iko iko bhaturuvha vharuvhu inoshanda?
Acid alkali munyu
Yakakwira yekumanikidza vharafu 6.4 ~ 80MPa
Yakadzika yekumanikidza vharuvhu ≤1.6MPa
Yepakati yekumanikidza vharuvhu 2.5 ~ 4.0MPa
Ultra yakakwira kumanikidza ≥100MPa
Vacuum vharafu <0.1MPa
Ne temp yepakati
Zvakajairika -40 ~ 120 ° C
-pamusoro-tembiricha 450 ~ 600 ° C
tembiricha yakadzika -150 ~ -40 ° C
yepakati-tembiricha 120 ~ 450 ° C
Ultra yakanyanya tembiricha> 600 ° C
yakanyanya-yakaderera tembiricha <-150 ° C
Iko iko kwevhavhavhavhavhavuruvhuru inoshanda?
Butterfly mavharuvhu akakodzera mapaipi anotakura akasiyana anokanganisa uye asiri anokanganisa emvura midhiya muinjiniya masisitimu senge majenareta, marasha gasi, gasi rechisikigo, kutonhora uye kupisa mhepo, kemikari simbi uye simba kugadzirwa uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye zvinoshandiswa kugadzirisa uye kusangana ne kuyerera kwesvikiro.
Butterfly mavharuvhu akakodzera kuyerera mutemo. Sezvo kudzvanywa kwekurasikirwa nevharufuru vharafu mupombi iri rakakura, ingangoita katatu iyo yevhavhavha yemusuwo. Naizvozvo, kana uchisarudza vharuvhu bhatafuru, simba rekushomeka kweiyo pombi sisitimu rinofanirwa kutariswa zvizere, uye simba repepuruvhuru yekumira kumanikidza kwepombi yepayipi inofanirwa zvakare kutariswa painovharwa. Uye zvakare, zvinodikanwa kuti utarise kudzikiswa kwetembiricha inoshanda iyo elastic zvinhu zvechigaro chevharuvhu zvinomira pakudziya kwakanyanya.
Hurefu hwesimba uye hurefu hwese hwevharufuru vharuvhu idiki, kumhanya nekuvhara kumhanya kunokasira, uye iine hunhu hwakanaka hwekudzivirira hunhu. Maumbirwo evhavhuruvhuru vharuvhu ndiyo inonyanya kukodzera kugadzira mavhavha akakura-dhayamita. Kana vharuvhu yevhirivheri ichidikanwa kudzora kuyerera, chinhu chakakosha ndechekusarudza nemazvo saizi nemhando yevharufu revhayafuru kuti rishande nemazvo uye nemazvo.
Kazhinji, mukugwinha, kudzora kudzora uye nepakati madhaka, urefu hwesaruro hunodiwa kuti hupfupike uye kumhanya nekuvhara nekumhanyisa kumhanya. Nezve yakaderera kumanikidza kuchekwa-kure, bhatafuru vharuvhu inokurudzirwa.
Panyaya yekugadziriswa kwenzvimbo mbiri, nzira yakadzikira, ruzha rudiki, kupisa uye kupisa kwemhepo, shoma shoma yekudonhedza kumhepo, uye midhiya inoshatisa, mavharuvha e butterfly anogona kushandiswa.
Paunenge uchishandisa butterfly vharafu pasi peakakosha mamiriro sekukachinjika kugadziridza, kuomarara chisimbiso kana kwakakomba kupfeka, yakaderera tembiricha uye mamwe mashandiro ezvinhu, yakasarudzika dhizaini katatu eccentric kana kaviri eccentric ine yakasarudzika yakagadzirirwa simbi simbi ine yekugadzirisa mudziyo inodiwa.
Iyo yepakati mutsetse butterfly vharafu yakakodzera mvura nyowani, tsvina, mvura yegungwa, mvura yemunyu, steam, gasi rechisikigo, chikafu, mishonga, mafuta uye akasiyana mamiriro, semuenzaniso zero gasi bvunzo kuvuza, hupenyu hwepamusoro zvinodiwa, uye kushanda tembiricha ye -10 ~ 150 ℃, Acid-base uye mamwe mapaipi anoda chisimbiso chakazara.
Iyo yakapfava-yakasimbiswa eccentric butterfly vharafu yakakodzera kune maviri-nzira kuvhura nekuvhara uye kugadzirisa kwe mweya uye guruva kubvisa mapaipi. Inoshandiswa zvakanyanya mupombi dzemagetsi uye nzira dzemvura musimbi, indasitiri yakajeka, simba remagetsi, uye petrochemical masisitimu.
Iyo simbi-kune-simbi chisimbiso zvakapetwa eccentric shavishavi vharuvhu inokodzera kupisa kwemaguta, huni, mvura uye gasi, oiri, asidhi uye alkali mapaipi, seye inodzora uye inokanganisa mudziyo.
Pamusoro pekushandiswa seyakakura-kumanikidza kumanikidza swing adsorption (PSA) gasi yekuparadzanisa chishandiso chirongwa kudzora vharuvhu, iyo simbi-kune-simbi chisimbiso katatu eccentric butterfly vharafu inogona zvakare kushandiswa zvakanyanya mu petroleum, petrochemical, kemikari, metallurgical, magetsi uye mimwe minda. Iyo yakanaka imwe nzira yevhavhavhavhavhavhavha, yekumisa vharuvhu, nezvimwe.
Post nguva: Jul-12-2021
Kwete. 10 Zhaiying Street, dunhu reChangan, Shijiazhuang, Hebei, China
Hot Tags, Hot Zvigadzirwa, Sitemap
Stainless Simbi Gate Valve, Stainless simbi Ball Valve, Angle Globe Valve, Gedhi reMvura Valve, Sluice Gate Valve, Trunnion Bhora Valve,